ပျော်ရွှင်စရာ ကျားနှစ် ၂၀၂၂ ခုနှစ် - Xinhua News Agency
ပေကျင်း ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ယခုနှစ်သည် တရုတ် လပြက္ခဒိန် (the Chinese lunar calendar) ထဲက ကျားနှစ်ဖြစ်သည်။ တရုတ် ၁၂ရာသီခွင် တိရစ္ဆာန်များထဲတွင် အပါအ၀င်ဖြစ်သည့် ကျားများကို တရုတ်ပြည်သူများက ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြသည်။
ဆိုက်ဘေးရီးယား ကျားဥယျာဉ်၊ ဟာဗင်
ဟေးလုံကျန်း ပြည်နယ်၊ တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း
ဝိုး၊ အပြင်မှာ ကြည့်လိုက်။ ဒီကျားတွေ အမဲလိုက်နေတာကို အနီးကပ်မြင်ရတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကျားကို တောဘုရင်အဖြစ် မှတ်ယူကြပါတယ်။ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုမှာ ကျားဟာ ရဲရင့်ခြင်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာကြီးခြင်း၊ ခွန်အားကြီးခြင်း၊ စွမ်းအားရှိခြင်းတို့ကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ နဖူးပေါ်က အစင်းကြောင်းတွေက “ဘုရင်”လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ တရုတ်စာလုံး “Wang”နဲ့ ပုံစံအနည်းငယ်ဆင်ပါတယ်။
တရုတ်ရိုးရာ ၁၂ ရာသီခွင်အရ ကျားနှစ်ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ စတင်ပါမယ်။
တရုတ်ရာသီခွင်ဟာ ၁၂ နှစ်မှာ တစ်ပါတ်လည်ပါတယ်။ ရာသီစက်ဝိုင်းတစ်ခုစီဟာ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်နဲ့အတူ ၎င်းတိရစ္ဆာန်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်လက္ခဏာတွေနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
ကျားနှစ်မှာ မွေးတဲ့လူတွေဟာ ရဲရင့်ပြီး ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းကြတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
သင်ဟာ ၁၉၃၈၊ ၁၉၅၀၊ ၁၉၆၂၊ ၁၉၇၄၊ ၁၉၈၆၊၁၉၉၈ သို့မဟုတ်၂၀၁၀ ခုနှစ်တွေမှာ မွေးခဲ့ရင် သင့်ရဲ့ တရုတ်ရာသီခွင် သင်္ကေတ က ကျားဖြစ်ပါတယ်။
ကျားတွေဟာ စွမ်းအားကြီးတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမွှေးပွပွနဲ့ ကြောင်အကြီးစားကြီးနဲ့လည်း တူပါတယ်။
ပြီးတော့ သူတို့ဟာ မင်္ဂလာရှိ‌စေတဲ့ အတိတ်နိမိတ်သင်္ကေတ လည်း ဖြစ်ပါသေးတယ်။
တရုတ်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုမှာ ကျားတွေဟာ ကျားနှစ်ဖွားတစ်ယောက်ရဲ့ မိသားစုကို မကောင်းဆိုးဝါးရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးတယ်လို့ ယုံကြည်ပြီး မကြာခဏ ၀တ်ပြုဆုတောင်းလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် အ၀တ်အစားများ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနဲ့ ဖိနပ်တွေပေါ်မှာ ကျားပုံတွေကို ပန်းထိုးပြီးအလှဆင်ကြရုံသာမကဘဲ တရုတ်ရိုးရာ သစ်ပင်ပုံသွင်းခြင်း၊ စက္ကူကို ဖြတ်တောက်ပြီး ပုံဖော်ခြင်း၊ ပန်းပုထုခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပြသတဲ့ လက်မှုအနုပညာရှင်တွေအတွက်လည်း ရေပန်းအစားဆုံး အကြောင်းအရာ ဖြစ်နေပါတယ်။
မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်မယ့်အန္တရာယ်ကြုံနေရတဲ့ ဒီကျားမျိုးစိတ်ကို ကာကွယ်ဖို့ လူထုက ပိုမိုစိတ်၀င်စားလာစေဖို့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကမ်ပိန်းတွေ အများအပြားပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာလည်း ဧည့်သည်တွေအကြား ပိုပြီး စိတ်‌၀င်စားစေဖို့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ဖော်ပြထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခု ရှိနေပါတယ်။
ဆိုက်ဘေးရီးယားကျားတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်မယ့်အန္တရာယ်ကြုံနေရတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေထဲမှာ အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ အဓိကအားဖြင့် ရုရှားနိုင်ငံ အရှေ့ဘက်ဒေသ၊ တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ဒေသနဲ့ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာ ကျင်လည်ကျက်စားကြပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံက မကြာသေးခင်က ဆယ်စုနှစ်ကာလများအတွင်း ကျားကောင်ရေ အရေအတွက်တိုးပွားလာစေဖို့ သားပေါက်ပွားရာနှင့် လွတ်လပ်စွာကျင်လည်ကျက်စားရာ အမျိုးသားဥယျာဉ်တစ်ခု တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဟေးလုံကျန်း ပြည်နယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း
ကျားနှစ်အထိမ်းအမှတ်ကို ကျင်းပရာမှာအထောက်အကူပေးဖို့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှာ လာဘ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ ဧရာမနှင်းပန်းပုရုပ်ကြီး‌ကိုထုလုပ်ထားမှုအပါအဝင် မွမ်းမံပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။
ကျားနှစ်ကို ကံကောင်းခြင်းတွေသယ်ဆောင်လာဖို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
“hu hu sheng hi” , “long teng hu yue” လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ “ကျားရဲ့ ထက်သန်တက်ကြွမှုနဲ့အတူ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပါစေ”၊ “ကျားခုန်သလိုမျိုး ရုတ်တရက်အောင်မြင်မှု အကြီးကြီးရပါစေ”လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
GLOBALink | Vlog: Happy the Year of the Tiger 2022!
This is the Year of the Tiger in the Chinese lunar calendar. Tigers, one of the 12 Chinese zodiac animals, are loved and adored by Chinese people.